Firefox na-emeri Browser War | Martech Zone
Ileba anya na ahịa na-adịbeghị anya maka ihe nchọgharị na-enye ụfọdụ nghọta banyere onye na-emeri ma na-efufu agha. Firefox na-aga n'ihu na-ewu ọkụ, Safari na-arị elu, Internet Explorer na-efunahụ ala. Ọ ga-amasị m ịkọwa ihe atọ ndị a na 'trọ' nke ihe na-eme.
Mgbe ebibisị Netscape Navigator, IE ghọrọ n'ezie ọla edo nke net. Ihe nchọgharị ahụ dị mfe, na-arụ ọrụ, ma tinye ya na ngwaahịa Microsoft niile. Ọzọkwa, ActiveX nwere obere ihe ngosi, na-achọ ka ọtụtụ ndị folks jiri ntụgharị. Kedu ihe kpatara iji ọtụtụ ihe nchọgharị mgbe otu n'ime ha na-akwado ụkpụrụ niile dị na weebụ? Mụ onwe m bụ onye ọrụ ntụgharị site na nsụgharị 6.
Na Internet Explorer 7, ụwa web imewe n'ezie na-ejide ume ya maka ihe nchọgharị ha nwere ike imewe maka nke ahụ ga-eme dabere na teknụzụ kachasị ọhụrụ nke Cascading Style Sheets. O di nwute, IE 7 na-emechu ihu. Na nyochaa na ntụgharị Blog, ọ bụghị ọbụna na radar ruo mgbe ihe nchọgharị ahụ bụ beta na mkpu nke nhụjuanya sitere na ụlọ ọrụ na-emepụta weebụ. Lastfọdụ ikpeazụ nkeji mmepe mezie ụfọdụ n'ime okwu… ma ezughị iji mee ka imewe ụwa obi ụtọ. Cheta - ọtụtụ n'ime imewe ụwa na-arụ ọrụ na Macs… na-enweghị Internet Explorer. Mana, ọ dị nwute na ha, ndị ahịa ha na-eji Internet Explorer.
Mana Ewoo, ya na Internet Explorer 7, Microsoft gbanwere mmekọrịta dị n’etiti onye ọrụ na onye ahịa ya. Maka teknụzụ dị ka mụ onwe m, ụfọdụ mgbanwe dị mma. Ma n'ihi na gbara gharịị ọrụ… enweghị ike ịnyagharịa gafee elu ihuenyo bụ ma ihe mgbagwoju anya na ihe mgbagwoju anya. Ha bidoro leba anya n’ihe ọzọ dị n’ebe ahụ. Firefox.
Nseta ihuenyo http://marketshare.hitslink.com/
Mimicking izugbe nchọgharị na arụ ọrụ nke laghachiri Navigator, Firefox ghọrọ ụzọ dị fechaa nke Internet Explorer. Maka ndị nnupụisi Microsoft na-enupụ isi, Firefox ghọrọ onye nwere mmasị ma bido ịgbaziri ahịa ahụ.
Ọrụ ndị ọzọ dị ka plugins na-enweghị atụ maka ijikọ na teknụzụ ndị ọzọ abụrụwo ezigbo uru nye Firefox. Ha na-aga n'ihu na-adọta ndị mmepe na ndị na-emepụta weebụ n'otu oge… ebe Firefox nwere mbugharị siri ike, mpempe akwụkwọ Cascading, yana ngwa mgbakwunye ndị ọzọ na-eme ka mmepe na njikọta dị mfe.
Ahịa na-agbanwekwa. ActiveX nwụrụ anwụ ma Ajax nọ na ịrị elu, na-agbazinye onwe ya na ihe nchọgharị ka Firefox. Enweghi ihe kpatara ya iji Internet Explorer n'oge a niile. Ọ bụrụ na ntụgharị nwere ike ime ya, Firefox nwere ike ịme ya nke ọma. A na-ejikwa Windows Updates chọọ ihe nchọgharị ahụ, mana ugbu a, ha nwere ike ịkwanye ma wụnye ya na enweghị ya.
Firefox ahapụbeghị ya bụ ojiji na nhazi ya dị ka Microsoft mere na IE 7, na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe ịgbanwe Firefox site na IE 6 n'ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe. Ọ mara mma, ọsọ ọsọ, na enweghị nkebi.
Site na nso nso a nke Mac n'ime ulo PC PC… ọ bụghị PC maka Mahadum, Womenmụ nwanyị na Childrenmụaka ọzọ. My ọhụrụ Mac na-agba ọsọ OSX, Windows XP (na Ndekota) na m nwere ike na-agba ọsọ ọ bụla nchọgharị na mbara ala chepụta na ịzụlite ka. Site na itinye Safari, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ na-enweta oke ebe Macs na-enweta oke. Amụma m bụ na Safari agaghị efu Firefox, agbanyeghị.
Microsoft gha eche na odi egwu - mana obu ya kpatara nsogbu ha. Ha ewepụla ihe ọ bụla dị mkpa maka ihe nchọgharị ha, ndị ọrụ kewapụrụ onwe ha, ndị na-ese ihe dị iche, ndị mmepe kewapụrụ, NA ha na-ahapụzi ndị ọzọ ka ha were ha na vetikal ndị ọzọ (mobile).
Internet Explorer na - ebibi onwe ya. Amaghị m ebe ndị ahịa ha lekwasịrị anya.
Mgbe ibudatara ma tinye Firefox, gaa na Tinye-ons ngalaba ma budata ọdịnaya gị. Maka onye ọ bụla na-eme nke a, m ga-ahụ gị n'anya iji ihe nchọgharị ahụ maka izu abụọ wee laghachi na saịtị m ma mee ka m mara ihe ị chere.
Adị m onye Microsoft na ihe karịrị afọ iri ugbu a, yabụ na abụghị m basher. Agbanyeghị, enwere m mmetụta nke ịbanye na mkparịta ụka banyere usoro ọgbaghara ndị otu IE enwetala.
Tags: agha nchọgharịnchọgharịfirefoxieonye nyocha intaneti 7microsoftonye netscape navigator
Blog na-eto ngwa ngwa na mbara ala?
Dec 8, 2006 na 11:36 PM
Ekwenyere m na ọ nweghị ihe kpatara iji jiri ọzọ, mana ọ dị nwute na ụwa ka juputara na ntanetị ọhụụ na-amaghị nke ọma. Olileanya okwu ọnụ ga-agbanwe nke ahụ n'ikpeazụ.
Dee 9, 2006 na 3: 54 AM
Abụ m onye ọrụ obi ụtọ nke Firefox ọtụtụ afọ ugbu a. Enwere m ịhụnanya na ya n'ihi ọtụtụ mgbatị, yana nchekwa dị elu karịa Internet Explorer.
Mgbe m nwetara MacBook Pro ọhụrụ m na mbido afọ a, m nwara Safari maka izu ole na ole, mana agaghachi na Firefox. Nhọrọ maka nhazi bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe. N’afọ gara aga, agbanweela m ndị ezinụlọ m niile (ma ọtụtụ ndị enyi m) na Firefox.
Dee 9, 2006 na 11: 27 AM
Paul achọghị imechu m ihu - mana ị ga-achọpụta na m deziri phobias m ka ọ bụrụ isi! Ezigbo nnweta si n'aka Paul onye dị mma zitere m ozi! Ndi be anyi mara m ma na m bu okacha amara n ’ileba asusu bekee anya. Ọ bụ ezigbo enyi ga-eme ka ị ghara imechu onwe gị ihu!
Paul nwere nnukwu blog na:
Dee 17, 2006 na 1: 17 AM
Ekwenyesiri m ike na Firefox na-agbanye IE 7 ma ọ bụ gaa n'ihu….
Ihe kpatara iti bụ ihe mgbakwunye Firefox na Firefox Add-ons.
Echere m na July 2007, Ntụgharị ga-eguzo na 35%
Dee 17, 2006 na 2: 21 AM
Assalamu, Fazal. Ekwenyere m na gị! Na Firefox 3 Alpha adịlarị, Mozilla na-enwusi nzọ ụkwụ nke Microsoft na-apụghị ịsọ mpi.
Feb 3, 2007 na 6:46 PM
M arụnyere IE7 na desktọọpụ computr na ọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe m fiddled na ya ụfọdụ ma mgbe m wụnye ya na laptọọpụ m, ọ wetara ihe niile na-akwụsị. Ọ bụrụ na achọpụtaghị m na mmemme ahụ (na-enweghị mgbakwunye ọ bụla) so na mmemme m n'okpuru ngwa m agaghị enwe ike ịbanye ma ọlị.
Enwere m nchegbu, ana m eme ụlọ akụ na ntanetị ma ejighị m n'aka na m nwere ike iji Foxfire. Ọ ga-amasị m ịnwale mana achọrọ m ozi ndị ọzọ.
Feb 3, 2007 na 7:39 PM
Banyere ego nke oge a n'ịntanetị na-akwado iwu ihe nchọgharị. Nchegbu a ga-abụ maka ịkwado SSL (Secure Sockets Layer), nke ahụ bụ ụzọ ezoro ezo nke ịkọwa data n'etiti ihe nchọgharị gị na sava ịntanetị nke ụlọ akụ. Firefox na-akwado SSL kpamkpam dịka ntụgharị na-enweghị njedebe. Zọ kachasị pụta ìhè ịmara na ị na-eji SSL eme ihe bụ na ị nọ na adreesị https: // kama http://. Agbanyeghị, ntụgharị na Firefox (na Opera na Safari) nwekwara ihe ngosipụta na usoro nkwenye na asambodo SSL na izo ya ezo dị irè ma na-arụ ọrụ nke ọma.
N'aka ozo - ikwesighi inwe nsogbu obula. N'ezie ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ ịlele ụlọ akụ gị "Nkwado" ihu iji hụ ma ha na-akwado Firefox. You'll ga-ahụ ya ọmarịcha ihe nchọgharị - ọsọ ọsọ nke nwere ọtụtụ goodies.
Daalụ maka ileta… na ịza ajụjụ!
Nov 3, 2007 na 5:50 PM
Firefox gafere akara nbudata nde 400 na, olile anya, ga-aga n'ihu. Ndi ozo bu uzo oganihu.
Ma na-emeri ndị nchọgharị agha… ka n'oge n'ihi na.
Nov 3, 2007 na 11:24 PM
Ejirila m ọtụtụ afọ rụọ ọrụ ntụgharị, gaa n'ihu na-eji ya ma na-egosipụtaghị uru ndị ọrụ Firefox nwere. Echere m na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ nwere ike ilekọta obere. Ekwenyere m na gị, na mgbanwe nke IE 7 bụ obere ihe mgbagwoju anya.
Nov 21, 2007 na 8:11 PM
Ekwenyere m na n'echiche gị na IE7 ma bụrụkwa onye mmebe weebụ, enwere m ihe ole na ole mgbe ahapụpụtara IE7. Anọ m ugbu a na-ewu ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ ma achọpụtala m ụfọdụ okwu na divs ma ọ dịghị ihe dị mkpa (ruo ugbu a). Naanị m ejiri IE7 mee ihe dị nta mana m na-atụ anya nnukwu nfe site na 6.0 maka nkwado CSS, wdg.
Adị m onye ọrụ Firefox ruo ọtụtụ afọ ma were ndị ọrụ ọhụụ ole na ole n'ụzọ. Echere m na ihe na-adọta m, yana ọtụtụ ndị ọrụ FF ndị ọzọ, bụ eziokwu na ọ bụ onye mmebe weebụ / onye nrụpụta enyi na enyi yana omenaala na-akpali ya. Echere m na ntụgharị ga-anọgide na-akụda na echere m na Microsoft ga-achọ ọrụ ebube n'oge a. Oge Firefox nwetara na Safari ji nwayọ na-enweta, na-apụ karịa ntụgharị na eziokwu ahụ na ha adaghị adaba n'ịmepụta ihe nchọgharị weebụ dabara, anaghị enyere ha aka ma ọ dịkarịa ala.
Anyị ndị na-emepụta weebụ nwere ike inye ha ọtụtụ ohere chances
Nov 22, 2007 na 7:44 AM
Okwu ndị a na-eduhie eduhie. Dabere na akwụkwọ akụkọ kachasị na nso nso a, a hụrụla m òkè IE "dara" site na 85.88% zuru ụwa ọnụ maka Q4 2005 ruo 78.5% maka Q3 2007. Nke ahụ bụ dobe 7.3% n'ihe dịka afọ abụọ.
Ka ọ dị ugbu a, Firefox esila na 9% gaa na 14.6% n'otu oge ahụ. Nke ahụ bụ mmụba nke 5.6% na ihe dị ka afọ abụọ.
Safari esiwo na 3.1% gaa na 4.77% - mmụba nke na-esighi ike ikwu maka ya.
Ee Firefox na-enweta na ntụgharị, mana ntụgharị ka nwere ihe karịrị 5x ndị ọrụ.
Ntọala ndị a sitere na Wikipedia "Usage_share_of_web_browsers" na n'ezie enwere ike ịkpa ókè n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
O doro anya na ọtụtụ ụwa achọghị ịma ihe ndị na-emepụta weebụ na-eche. M ga-eche na anyị kwesịrị ịhazi maka igwe mmadụ karịa ichegbu onwe anyị banyere mmasị anyị.
Nov 22, 2007 na 8:48 AM
Daalụ Rick! Anyị enwere ike ịjụ ebe isi mmalite gị gbasara stats?
Ekwenyere m na gị, mana enwere akụkọ ịdọ aka na ntị iji ghara ileba anya n'ihe ndị na-emepụta weebụ na-eche… na nke ahụ bụ na imewe weebụ ga-anọgide na-abụ ihe dị oke ọnụ mgbe ị ga-emepụta n'èzí nke ụkpụrụ iji mee ka obi dị 85.88% ahịa!
Nov 22, 2007 na 2:25 PM
Ọ bụ ihe dị mkpa mgbe niile ịmepụta maka ndị mmadụ mana eziokwu ahụ bụ na Microsoft anaghị eso onye ọ bụla, na-eme ka ọrụ anyị sie ike karị. Achọpụtara m mgbe ụfọdụ ide ederede akwụkwọ iche iche naanị maka naanị IE na nke ahụ na-ewe oge. Ọ na-apụtaghị ihe ọ bụla na nkezi ọrụ. Ọ bụ naanị ihe nkoropụ mgbe ihe nchọgharị nke na-eduga mkpọ ahụ bụ nke kachasị ụkpụrụ weebụ kwekọrọ.
Nov 22, 2007 na 3:44 PM
Enweghị m arụmụka na nchegbu gị sitere na echiche onye nrụpụta, agbanyeghị na ejighi m n'aka ihe kpatara ị ga - eji nwee nchegbu na ị nwere ike ịgba ndị mmadụ ụgwọ maka ọrụ gị. Ọ bụ na ndị mmadụ adịghị njikere ịkwụ ụgwọ ya? O doro anya na ndị a bụ nsogbu ndị ọkachamara a ga-emeri.
Naanị m na-ese okwu na aro na e nwere nnukwu ije na-apụ na ntụgharị. The stats (dị ka m nwere ike ịgwa) anaghị akwado nkwupụta ahụ, n'agbanyeghị ndị niile na-emepụta ihe na SEOs na-ekwu n'ụzọ na-adịghị agwụ agwụ na-akwalite FF. Ma ha kwesiri ịkwalite ya bụ ajụjụ ọzọ, ị nwere ike ịbụ eziokwu zuru oke banyere nke ahụ.
Dịka m kwuru na okwu m, isi mmalite m bụ Wikipedia - ọ bụghị isi iyi na-adọrọ mmasị, mana ọnụọgụ mara mma nke ọma…
Nov 23, 2007 na 5:42 PM
Ick nwere ike ịbụ eziokwu na okwu abụọ ahụ, Rick. M ga-arụ ụka na ntụgharị na-aga n'ihu na-enwe oke òkè nke ahịa n'ihi na ọ bụ akụkụ nke Sistemụ nrụọrụ, ọ bụ ezie. Ọ bụrụ na ọ bụ nbudata maka nbudata na nhọrọ dị mma, ekwenyere m n'ezie na FF ga-egwu ha.
Dee 21, 2007 na 6: 51 AM
Abụ m onye mmemme na onye nrụpụta weebụ. Na 2003, enwere m ihe ọghọm ma kụọ m isi. Koodu ide ihe kariri m ike, ya mere ugbu a abum onye jo jo..lol
Ka o sina dị, anọ m na-eji Linux kemgbe 1996 (cheta Caldera-mgbe ị ga-ahapụ ya ka ọ budata onwe ya maka ụbọchị 2..lol). Ihe nchọgharị weebụ adịghị mma maka ya tupu Firefox. Mgbe Firefox bịara, ọ bụ ihe kachasị ukwuu maka ndị ọrụ Linux (Thunderbird too). Ebe Microcrap na-agbachapụ ndị ọrụ Linux mgbe niile, ha gbara onwe ha ụkwụ. M na-echeta Firefox / Thunderbird-aghọ n'elu internet ụlọ nke Linux mfe. Ọ bụghị nnukwu, ị nwere ike itinye mgbakwunye ọ bụla masịrị gị (adblockl!). N'ihi ya, ọ dị ka ìhè ma ọ bụ dị arọ ka ị na-eme ya. Enweghị akụkụ achọghị. Taabu ndị ahụ dị jụụ na pere mpe.
Ana m eji Windows x ugbu a, maka na 'ndị ọzọ' ebe a dị nwute mere ka ọ bụrụ ọnọdụ ịzụta pc a, yabụ 'ha' nwere ike iji ya (nzuzu). Ọ bụ ya mere m ji budata Firefox / thunderbird ozugbo. Mgbe m jiri Windows ọzọ, HATED Outlook express, ma chọọ Firefox azụ, yana ndọtị m (echekwara m faịlụ config niile na ibe edokọbara m na Linux, ma webata ha na Winxp!).
N'oge na-adịbeghị anya, pc m bidoro n'otu ntabi anya, enwere m ihe ngosi a na-ele anya dị ka abụba nwere nnukwu taabụ na-agaghị agabiga. Ogwe osisi friji na-ewe 1/5 nke ihuenyo amachibidoro! M kpọrọ ya asị! Ndị ọzọ niile nọ ebe a kpọrọ ya asị. Ebee ka bọtịnụ nkwụsị? Ọ dịghị onye chọrọ ka ihe nchọgharị weghara ohere buru ibu! Massive tabs, ọbụlagodi mgbe enwere naanị peeji 1 !!
Kedụ maka ibe weebụ? Pụghị ịhụ ya n'ihi na ihe ị na-ahụ bụ BROWSER! Ọ na-adọgharị uche, na enweghị m ike iguzo ya. Microsoft adighi enwe ebe mkpesa. Kedu ikpo ekpofu ahịhịa. Mkpebi ihuenyo m atọrọ na 1152 × 864 na enweghị m ike iche etu ọ ga-adị na 800 at 6000! M ga-enwe ike ihu peeji ahụ?
Ya mere, mkpịsị aka ukwu abụọ maka IE2! Onye ọ bụla kpọrọ ya asị, ọ bụkwa ọnwụ nke ntụgharị. Na ọchị, ha nwere nchọgharị dị mma, mana site na i copomi Firefox, ha nwere ugbu a. Echere m .. Kedu ihe niile na-adịghị mma na ogwe ngwaọrụ, na ebee ka bọtịnụ ndị ọzọ dị?
Yabụ, daalụ Microsoft, imerela onwe gị n'ikpeazụ! Ana m eji oge dị ukwuu akọwa ndị ọzọ na-akpọ ma jụọ ihe kpatara ihe nchọgharị ha ji jọgburu onwe ya na mgbagwoju anya, ma nyere ha aka iwepụ IE7! Onweghi onye choro ya!
Mee 28, 2008 na 12: 30 PM
Echere m na aka nri gị Mazi Blog, aga m eji Firefox na kọmputa m ihe karịrị otu afọ ugbu a ma elebeghị anya azụ kemgbe. Onye ọ bụla maara ihe ọ bụla gbasara ngwanrọ kọmputa nwere ike ịgwa gị na Firefox bụ ihe nchọgharị kachasị elu. Enwetụbeghị m ngwanrọ Thunderbird n'ihi na Outlook 2007 na Office Enterprise dị oke mma ma na-arụ ọrụ dị ukwuu maka m. Gini mere iji gbanwee ya ma obughi n’abia. IE 6-7 agbajiri n'agbanyeghị, oge ọ bụla m na-arụ ọrụ na ndị enyi, ezinụlọ, enyi na ntanetị, ma ọ bụ naanị onye chọrọ enyemaka m na-etinye ma ọ bụ gwa ha ka ha nweta Firefox. Ọ bụ enweghị ụbụrụ na akwụkwọ m.
Naanị m chọrọ ịma ihe kpatara Microsoft ji chee na ha na-ahapụ ihe nchọgharị ka elu, ọ bụ na ha enweghị ihe ọ bụla nye ụwa gbara ha gburugburu? Ọ bụ n'ihi na ha chere na sọftụwia ha dị ịtụnanya na ndị mmadụ ga-eji ya rụọ ọrụ? Ma obu obu n'ihi na Microsoft na-acho ijeri na ijeri kwa ubochi ma ha siri “chefuo onye ahia anyi amaghi ihe ha chere” ya mere ha siri manye ihe nchoputa na-abaghi ​​uru na anaghi anabata ya na ahia. Ndi nzuzu! Ya adịghị ka m nwere a junky kọmputa, ntụgharị na-agba ọsọ dị ka unyi na usoro ọ bụla. Ọ ghaghị ịnọ na koodu ngwanrọ ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Naanị maka ị funụrị ọchị, eburu m ya taa iji hụ ma ọ bụrụ na ọ kawanye site na ọrụ ebube (nope) ka na-eme. Mgbe ahụ, m gwara onwe m "Gịnị kpatara, gịnị kpatara ya ji agba ọsọ otú ahụ" yabụ m wee chọọ (Gịnị kpatara Internet Explorer ji jiri nwayọ nwayọ) na n'ezie ejiri m nchọta peeji nke Google na Firefox. Emechara m ebe a mgbe m gbasoro njikọ sitere na saịtị ọzọ yana isiokwu dị ka nke a na ya. Enwetara m akụkụ a na-enyocha ka m wee nwee azịza m. Gaa Firefox Gaa! Kick Bill Gates na akụ maka anyị niile otu oge kwa onye ọ bụla na-aga n'ihu. M ga-arịba otu nsụgharị azụ na FF n'agbanyeghị, ọ dị njọ banyere oriri nchekwa. Mfe idozi echiche, ngwa ngwa, ọ bụghị nwayọ ịmalitegharịa ga-edozi nke ahụ.